Ka 19, 2018 admin
Coincheck achọ ihu ọma Japanese regulators & ezube US mgbasa
Erughị ọnwa anọ mgbe adịkwa-enwetụbeghị ụdị $500 nde cryptocurrency ka hackers, Japanese cryptocurrency mgbanwe Coincheck na-akpa nkata ya comeback.
N'okpuru ọhụrụ na-edu ndú mgbe ọkụ ire na brokerage Monex Inc., Coincheck e okodu kpamkpam mma nche na weghachi obi ike n'etiti ahịa onye pụrụ dịkarịa ala $540 nde ke Ruth nke hack. N'ajụjụ ọnụ, Monex Chief Executive Officer Oki Matsumoto kwuru na ya na-atụ anya na mgbanwe iji nwetara ihe ukara ikike na Japan ọzọ ọnwa. Ọ na-na-na-eme atụmatụ iji mee ka Coincheck si n'elu ikpo okwu na America.
Matsumoto wee gaa n'ihu ịsị "Anyị nwere ike sakwuo mbara anyị ahịa isi na Coincheck.”
Bitcoin & kaadị - A Haven...